Isikhokelo se-Procrastinator kuThengiso lweeholide | Martech Zone
Isikhokelo seProcrastinator kuThengiso lweeholide
NgoMvulo, Novemba 25, 2019 NgoMvulo, Novemba 25, 2019 U-Yael Zlatin
Ixesha leholide lilapha ngokusesikweni, kwaye liyilo ukuba libe lelona likhulu kwirekhodi. Nge-eMarketer yokuqikelela inkcitho yokuthengisa nge-e-yorhwebo idlula kwi-142 yezigidigidi zeedola ngeli xesha lonyaka, zininzi izinto ezilungileyo zokuhamba ujikeleze, nkqu nakwiivenkile ezincinci. Icebo lokuhlala ukhuphiswano kukufumana ubuchule malunga nokulungiselela.
Ngokufanelekileyo uya kuba sele uyiqalisile le nkqubo, usebenzisa iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukucwangcisa umkhankaso wakho kunye nokwakha uphawu kunye noluhlu lwabaphulaphuli. Kodwa kwabo basafudumeza iinjini zabo, khuthazeka: akukabi kudala ukuba wenze impembelelo. Nanga amanyathelo amane ekhonkrithi anokukunceda ukwakha kunye nokwenza isicwangciso seholide esiphumelelayo.
Inyathelo 1: Lungiselela ixesha lakho
Nangona 'iiholide' ngokobuchwephesha be-Thanksgiving kwiKrisimesi, ixesha lokuthenga ngeholide alichazwanga njalo. Ngokusekwe kwindlela yokuziphatha yokuthenga ka-2018, uGoogle uyakubonisa oko Iipesenti ezingama-45 zabathengi baxele ukuba bathenge isipho seholide nge-13 kaNovemba, kwaye abaninzi sele begqibile ukuthenga iholide zabo ngasekupheleni kukaNovemba.
Ngomhla wexesha olumkileyo, ukufika emva kwexesha ethekweni akuyi kuthetha ukuphoswa yikhosi ephambili. Sebenzisa phakathi ku-Novemba ukugxila kuphawu lwentengiso kunye nokukhangela phambili-oku kuya kukunceda ufikelele kubathengi kwangoko kwinqanaba labo lokujonga kunye nokuthenga.
Njengombulelo kunye nendlela yeVeki ye-Intanethi, qala ukukhupha izivumelwano kunye nokwandisa iintengiso kuwo onke amajelo, ukudala ulonwabo phakathi kwabathengi. Emva koko, yongeza uphando lwakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali phambi kweCyber ​​Monday. Ngokubanzi, ukwanda kohlahlo-lwabiwo mali kathathu ukuya kahlanu ngalo lonke ixesha leeholide kuya kukunika elona thuba lifanelekileyo lokufumana olo tshintsho longezelelweyo kwimarike yokhuphiswano.
Okokugqibela, i-Q1 ibonakalise ukuba yenye yezona nyanga zinamandla kwi-e-commerce, ethwele umfutho weholide kuNyaka oMtsha. Gcina uhlahlo-lwabiwo mali lomelele ubuncinci nge-15 kaJanuwari ukuze wenze eyona nto ikhulayo yokuthenga emva kweholide.
Inyathelo 2: Yenza ngokobuqu phambili ubuNtu
Uninzi lwabathengisi abancinci abanakuze babe nethemba lokuthelekisa uhlahlo-lwabiwo mali lweentengiso zeengxilimbela ezinje ngeAmazon kunye neWalmart. Ukuhlala unokhuphiswano, intengiso ekrelekrele- hayi nzima - ngokwenza i-personalization yakho.
Njengoko uqokelela isiko lakho kwaye ujonge-njengabaphulaphuli, jolisa kwixabiso lobomi. Ngubani phakathi kwezintlu zakho ochithe eyona mali kunye nawe, kwaye ngubani othenga kunye nawe rhoqo? Ngoobani abathengisi bakho bakutshanje? Ezi zezona njongo ziphambili zokuthengisa kunye nokuthengisa umnqamlezo, ngokunxaxha kwinkcitho eyongezelelweyo yentengiso, ukucebisa ngezinto ezinxulumene noko, ukubonelela ngokubopha ngesaphulelo okanye ukunika isipho ekuphumeni.
Ngelixa ukhulisa abathengi ebomini, ungalibali ukulandelela kunye nokujolisa kubakhenkethi abatsha. I-Criteo inika ingxelo yokuba abatyeleli bewebhusayithi abaphinda bajonge iintengiso 70% ngaphezulu ukuguqula. Ukurekhoda umsebenzi wabakhenkethi kunye nokwakha uluhlu lwamaqhekeza ngalo lonke ixesha leeholide kubalulekile ekubabuyiseni nasekuqinisekiseni ukuguqulwa.
Inyathelo 3: Ukunyusa ubuGcisa beCraft
Ukunyusa kuya kusebenza kakuhle ukuba ziyahambelana neemfuno kunye nokukhethwa ngabaphulaphuli bakho. Ukuphonononga imeko yakho yeholide edlulileyo kwaye ufunde ukuba yintoni esebenzayo, emva koko utyale imali kwezo nyuselo.
Andiqinisekanga ukuba yeyiphi eyona nto isebenza kakuhle? UMarketer uxela ukuba Uninzi lwezithembiso zentengiso ezithandekayo zizaphulelo ngama-95% angaphaya kwamandla. Ukuhanjiswa simahla kukwafuneka kwakhona xa kunokwenzeka, kunye nezipho zasimahla kunye neendawo zokunyaniseka zikwanomdla kubathengi. Kuxhomekeke kwimveliso kunye nohlahlo-lwabiwo mali, unokuthathela ingqalelo imihla yokuhanjiswa okuqinisekileyo, iikhowudi zekhuphoni, iiseti zezipho ezisongelwe kwangaphambili kunye nemiyalezo yesiko.
Inyathelo 4: Fumana iNdawo yeTrafikhi yakho ekuLungele
Ngaba iwebhusayithi yakho ikulungele ukugcwala kweeholide? Utshintsho oluncinci oluncinci lunokwenza umahluko omkhulu xa kuziwa ekwenzeni intengiso yokugqibela.
Qala ngokuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho idilesi yemibuzo ephambili kunye namathandabuzo avela ngexesha lamava okuthenga. Uphezulu kangakanani umqobo ekungeneni? Kulula kangakanani ukubuya? Ndiyisebenzisa njani le mveliso? Amanyathelo alula afana nokwahlulahlula iimveliso ngexabiso, kubandakanya uphononongo lwabathengi kunye nokucacisa ubungakanani bokubuyela kunceda ukwakha ukuthembela kubathengi.
Okulandelayo, yenza iwebhusayithi yakho ukuba ibe lula ukuhamba ngeselula. Uphando lukaGoogle lubonisa oko Ngama-73% abathengi abaza kutshintshela kwisiza esingahambelwanga kakuhle esiya kwiselfowuni oko kwenza ukuthenga kube lula. Musa ukubeka emngciphekweni wokuphulukana nolu tshintsho ngokujonga ubukho bakho obuphathwayo.
Okokugqibela, yenza eyona ndawo ibaluleke kakhulu kwivenkile yakho ye-e-commerce: ukuphuma. Thatha ixesha lokuqonda ukuba yintoni ebangela abathengi bashiye iinqwelo zabo kwaye balungise le micimbi. Ngaba yimirhumo yokuthumela okanye amanye amaxabiso angalindelekanga? Ngaba ukuphuma kwakho kunzima kwaye kudla ixesha? Ngaba abathengi kufuneka benze iakhawunti? Yenza lula le nkqubo kangangoko kunokwenzeka ukuze uzinike elona thuba lilungileyo lokugqiba ukuthengisa.
La ngamanyathelo nje ambalwa ekufuneka uwathathile xa ulungiselela ixesha leholide- kodwa akukhathaleki ukuba uqala emva kwexesha elingakanani, inyathelo ngalinye ekusebenziseni ulwenziwo kunye nokwenza kube ngokwakho kuya kunceda ukwenza umahluko kumgca wakho osezantsi. Ngcono nangakumbi, umsebenzi owufakileyo ngoku, ukusuka ekujongeni izinto ukuya kutshintsho kwisiza kuphuhliso lwebrand, sele zikulungiselela ukuthengisa ngokusebenzayo kuNyaka oMtsha nangaphaya.
tags: Iveki ye-cybereCommerceukuthenga iholideUkulungiswawalmart
U-Yael nguMlawuli we-E-yorhwebo IAdtaxi. Uneminyaka ebonakalise impumelelo ekwakheni iifaneli zokuguqula ngempumelelo kwaye uyinkokeli yokucinga eqhubela phambili kunye nomcebisi wokuqeqesha, okhokela kunye nokukhuthaza amaqela angaphakathi kunye nalawo abonakalayo.
Uyihambisa njani indawo yakho yeWordPress kwiDomain entsha